Dowlada Sweden oo ka doodaysa arimaha Socdaalka | Somaliska
Dowlada cusub ee Sweden ayaa dood ka yeelanaysa arimaha la xiriira soo galootiga ayadoo [caption id="attachment_751" align="alignright" width="300" caption="Wasiirka Isdhexgalka"] [/caption] wasiirka Isdhexgalka ee cusub Erik Ullenhag uu soo jeediyay in dadka soo galootiga ah ee aan sharciga la siin loo ogolaado in ay iskuulada dhigtaan caafimaad buuxana ay helaan. Arintaas ayay ku kala qaybsan yihiin xisbiyada ka midka ah xulufada talada haysa ayadoo wasiirka uu sheegay "Waa caqli gal in aad xaq u yeelato in aad hospital tagto xataa haddii aadan sharci lahayn oo aad dhuumasho ku joogto Sweden". Arimaha soo galootiga iyo isdhexgalka ayaa u muuqata mid ay xiisaynayaan dhamaan xisbiyada ku jira baarlamaanka Sweden ayadoo la sheegay in raysal wasaare Reinfeldt uu xiriir la sameeyay xisbiyada kale sida Social Demokraterna.
Dowlada Sweden oo ka doodaysa arimaha Socdaalka
Dowlada cusub ee Sweden ayaa dood ka yeelanaysa arimaha la xiriira soo galootiga ayadoo
wasiirka Isdhexgalka ee cusub Erik Ullenhag uu soo jeediyay in dadka soo galootiga ah ee aan sharciga la siin loo ogolaado in ay iskuulada dhigtaan caafimaad buuxana ay helaan.
Arintaas ayay ku kala qaybsan yihiin xisbiyada ka midka ah xulufada talada haysa ayadoo wasiirka uu sheegay “Waa caqli gal in aad xaq u yeelato in aad hospital tagto xataa haddii aadan sharci lahayn oo aad dhuumasho ku joogto Sweden”.
Arimaha soo galootiga iyo isdhexgalka ayaa u muuqata mid ay xiisaynayaan dhamaan xisbiyada ku jira baarlamaanka Sweden ayadoo la sheegay in raysal wasaare Reinfeldt uu xiriir la sameeyay xisbiyada kale sida Social Demokraterna.